KUFSIINTA UKUMAHA DUURJOOGTA GURIGA: QAABKA ISUGEYNTA, MIISKA, VIDEO - BEERAHA DIGAAGA
Beeralayda digaaga ayaa badanaa waxay ku dadaalaan inay helaan caano cusub oo ay ku jirto gacan qabashada kulubka. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in noocyada duck nuucyada badan ay ka lumeen dareenka hooyada oo aysan ku daboolin ukumaha. Xaalad kale, dhalmo cusub ayaa loo baahan karaa jiil cusub, taas oo suurtogal ah in tiro badan oo sidaas oo kale ah oo keliya ee shuruudaha naqshadda. Marka dareenka duurjoogta ee guriga lagu kobciyo, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado xeerar aasaasi ah, ka dibna taas oo noqon doonta fure u ah ciyaal caafimaad qaba oo caan ah.
Ukumaha ay ku haboon tahay in la isugeeyo
Nidaamka isugeyntu wuxuu ku bilaabmaa xulashada badeecada ukunta. Tani waa daqiiqad aad u muhiim ah, maaddaama ay suurtogal tahay in carruurtoodu mustaqbalka ay ku xiran tahay tayada ukunta. Oo waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato muuqaalka, laakiin sidoo kale nadiifinta ukumaha, sababtoo ah qolofka qashinka ah wuxuu keenayaa dhalmo halis ah bakteeriyada khatarta ah, taas oo markaas ka dib kala badh badhkeedda yar yar.
Waa muhiim! Ukunta loo yaqaan 'duck dumbfeed' loogu talagalay 'bookmark' waa inay si fiican u ekaataa - qiyaasta isku midka ah iyo ovalaha ama wareegsan, si fiican u nadiif ah oo nadiif ah.
Qodobbada ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad taxadar yeelatid markaad doorato:
miisaanka - ukumaha ducgu waa weyn yahay, miisaankoodu waa inuu ka yaryahay 75 ilaa 100 g;
foomka - waa in uu noqdo mid caadi ah, mid ayaa odhan kara macquul, iyadoon isbedel aan sax ahayn, oo aan ka fogeyn, aan wareegsaneyn oo aan la baddelin;
qolofku waa nadiif, oo aan lahayn wasakhayn, mid fudud oo qaro weyn leh, midabkuna sida caadiga ah waa wax yar oo leh cagaar cagaaran. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in ay tahay in ay jirto cillado aan cillad lahayn oo dusha sare ku yaalla - jajab, ama xoqid, ama dildilaacyo ama deformations, iyadoon koritaan iyo cirrid.
Xeerarka kaydinta ukunta
Kaliya bacda cusub ayaa la geyn karaa kiniinka. Kaydinta waxaa loo oggol yahay kaliya 5 maalmood (toddobaadkii ugu badnaan), laakiin maya maya. Foomka lagu kaydiyo waa saxaar ka samaysan tufaax, heerkulka kaydinta wuxuu ku saabsan yahay +12 C (heerkulka ugu hooseeya waa +8 ° C), qoyaanku wuxuu ku jiraa 70%. Sidoo kale ka feker hawo wanaagsan.
Inta lagu jiro kaydinta, ukumaha waa in loo rogaa dhinac dhinac ilaa 90 ° dhowr jeer maalintii. Tani waxay ka fogaan doontaa in la jiido maraqa dariiq kasta oo ka hortagaya embriyaha si ay ugu dhajiso mid ka mid ah dhinacyada qolofka.
Waa muhi muhiim u ah booska kaydinta alaabta. Sidaa daraadeed, waxaa fiican in la dhigo ukunta duke yar oo sidan ah oo ay u eegaan dhamaadka cirridka saqafka, iyo fiiq - hoos. Laakiin kuwa waaweyn ayaa lagula talinayaa in la dhigo si ay u joogaan boos yar oo jilicsan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa ugu wanaagsan in ay ukumaha u dhigto sida cusub ee suurtogalka ah ee ku-naqshada. Waxaa lagu talinayaa in guriga digaagga si fiican loo nadiifiyo fiidkii, oo fiiro gaar ah u leh hareeraha si ukumo aan loo faddarin oo bakteeriyadu halkaas u degi karto. Laakiin subixii waxaad bilaabi kartaa ururinta. Fikrad ahaan, waxaad isticmaali doontaa saacad kasta oo ururineysa - kiiskan, si buuxda nadiif ah, caafimaad ahaan iyo gebi ahaanba tijaabada cusub ayaa kuugu dhici doona xariirkaaga.
Baaritaan dheerad ah ukun
Ovoskopirovanie - waxaa loogu yeeraa geedi socodka x-rayiga iyada oo la adeegsanayo iftiin iftiin ah - shuban. Ovoskopirovaniya waxay kuu oggolaaneysaa inaad xaqiijiso haqab-beelka embriyaha.
Baro waxa qalabku yahay iyo sida loo sameeyo naftaada, iyo sidoo kale, baro sida loo habeeyo ukunta.
Nidaamkani wuxuu kaloo kaa caawinayaa in la ogaado cillado horay u aragti ah - tusaale ahaan, dildilaasyada microscopic, cilladaha hoostiisa ee qolofka, dhibco cufan ama dufan dufan leh.
Shucaacu waa habka ay suurtagal u tahay in lagu ogaado xaaladda gobolka iyo borotiinka gudaha iyo in lagu garto jilicsanaan la'aanta hawlaha muhiimka ah ee is-beddelka.
Tusaale ahaan, waa in hoos loo dhigaa ukumaha shucaaca waa in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
geedka waa in lagu dhajiyaa oo kaliya bartamaha, iyada oo aan ugu yaraan u wareegin dhinaca;
dariiqa waa inaysan gabi ahaanba dhicin oo ku dhegsanaan dusha sare ee qolofka;
Sidoo kale, dariiqa waa inaysan ka laalaabin dhinaca dhinac dhinac ah iyada oo aan wax khasaare ah u ah xarunta;
borotiinku wuxuu u muuqdaa mid hufan isla markaana ma jiraan wax dhibco dheeraad ah ama wax ka baxsan;
qolka hawadu waa inuu ahaadaa mid yar oo cabbirkiisa ku yaal oo kaliya meel ku taal dhinaca dambe ee cantoobaha ama aad ugu dhow;
waa inaysan jirin meelo mugdi ah gudahood;
Joogitaanka laba xabbo oo aan la aqbali karin.
Haddii ukumiintu buuxiso shuruudahan oo dhan, mana jiraan waxyeelo dibadeed ama cillado ah, markaa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid caqli gal ah oo ku haboon in la isugeeyo.
Miyaan u baahanahay inaan ku dhaqo ka hor inta aan la saarin
Arrintan oo kale, beeraleyda digaaga badan ayaa ku doodaya. Sababta khilaafku waa in digaaggu ay naftoodu yihiin kuwo wasakh ah, si ka duwan sida haaddii kale ee kale.
Baro sida loo dhaqo loona nuugo ukumo ka hor inta aanad ku dhicin maskaxda iyo sida loo saxo nadiifinta maskaxda.
Intaas waxaa sii dheer, nuucyada nafsaddooda inta lagu guda jiro xirmooyinka waxay badanaa taabtaan qashinka oo leh dhuun qoyan, tani ma saameynayso tayada farcankiisa.
Sidaa daraadeed, beeraleyda qaar ayaa ra'yi ka ah in la dhaqo qolofka waa mid faa'iido leh oo xitaa lagama maarmaan u ah in laga takhaluso wasakheynta iyo bakteeriyada suurtagalka ah.
Waa muhiim! Si looga fogaado luminta kaydka dhalinyarada, laguma talinayo in la dhaqo ukumaha duur-qaadka ka hor inta aanuu ku dhicin masraxa.
Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, nidaamkani maahan mid gebi ahaan la jecelyahay. Ku dhaqida ukumaha waa nidaam jebiya microflora dusha sare ee qolofka. Inta lagu jiro dharka, dusha sare ee dusha sare waa waxyeello, taas oo ugu dambeyntii saameyn ku yeelata hargabku. Waxaa ugu wanaagsan in marka hore la doorto badeecada ukunta saafiga ah. Bixinta xaaladahan oo kale ayaa bixinaysa damaanad ah in qolofka ay ku jirto tirada ugu yar ee bakteeriyada jiran.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo nadiifinta dibedda ee ukunta, haddana waxay u baahan yihiin fudud, laakiin qasabka jeermiska. Si arrintan loo sameeyo, kaliya jooji ukumo kasta ee xal daciif ah ee kiniinka potassium for dhowr daqiiqo.
Dhibaatooyinka oo dhan waa in si taxadar leh loo taxaddaraa oo si taxaddar leh, xitaa xitaa xoqida yar ama qashinka ah ee qolofka ayaa si xun u saameeya qashinka ugu dambeeya.
Nidaamka lagu dhajiyo badeecooyinka ukunta ee ku jira masrax-qabe wuxuu bilaabmaa isagoo gelinaya qalabka qol gaar ah loo qoondeeyey. Waxaa lagu talinayaa in digaagga ama xayawaanka kale aan lagu haynin qolka kiniinada, qolkani waa in loo isticmaalo kaliya ducklings taranta. Cabirka muhiimka ah ee qolka waa qoyaan. Waa inay noqotaa mid la mid ah sida buulkeedii buulkeedii iyo buulkeedii.
Taas ka dib, diyaarinta duck diyaarinta waxay bilaabmaysaa in si toos ah loogu dhajiyo khadka. Mar kale hubi tayada si tayada leh, iftiin leh shaandheyn, eeg miriimitir kasta oo ka mid ah qolofka.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad barato sida loo doorto ukumaha qumman ee tayada sare leh, iyo sidoo kale inaad aragto miiska si aad u xakameyso ukumaha duurjoogta guriga iyo dabeecadaha ducklings sii kordhaya ee ka soo horjeeda.
Tallaabooyinka dheeraadka ah waa inay ahaadaan sidan soo socota:
Qalabka kabuubka ka hor inta aan la saarin badeecada ukumaha ayaa lagu sharraxay heerkulka loo baahan yahay.
Dhammaan baayacmushyada ka hor intaan la dhigin maskaxda ayaa si fiican loo dhaqay oo la nadiifiyaa.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo weel biyo ku jira digsi kulul, taas oo lagama maarmaan u ah hawada qoyaanka iyo ilaalinta heerka loo baahan yahay qoyaanka.
Cuntada caanaha ayaa si taxadar leh loogu dhajiyay maskaxda, adigoo horey u dhigay - tani waa meesha ugu fiican ee ukumaha ducada. Iyo inkasta oo ay ku qabsanayaan meelo badan, taasi waxay ka dhigan tahay in shimbir yar oo ka soo baxaya ka mid ah kulul, laakiin hatchability ee ducks ee booskan waa ka badan.
Midka ugu horreeya ee saaraya qalabka nuqulada ugu weyn, iyo 4 saacadood ka dib - dhexdhexaad ah iyo yar yar.
Nidaamka kaadida ee ukunta dufanka: miiska
Ka dib markii la soo saaro badeecada ukunta ee ku xeeldheer, geeddi-socodka maskaxda ayaa bilaabmaa. In ducks, muddadani waa muddo dheer.
Waa muhiim! Haddii aad haysatid casiraad casri ah oo leh hawsha xakamaynta qoyaanka, heerkulka, wareegga hawada iyo ukunta, kadibna waa lagaa sii daayaa dhammaan dhibaatooyinka la xidhiidha isugeynta duurjoogyada taranta.
Waqtigaan oo dhan, waa inaad si taxadar leh u fiirisaa oo aad maalin walbaa ula socotaa geeddi-socodka qabqabashada iyo qabashada tallaabooyinka lagama maarmaanka
Waqtiga gelinta kuleyliyaha qalabka, heerkulka waa inuu u dhigmaa kulaylka +38 ° C. Nidaamka heerkulka waa in lagu hayaa inta lagu jiro 7da maalmood ee ugu horeeya, ka dibna waxaa la yareeyaa +37 ° C. Qoyaanku wuxuu waqtigan xajiyaa ilaa 70%. Goobta ukunta inta lagu jiro maalinta waa in la beddelo ugu yaraan 4 jeer.
Dhammaan waqtiga intiisa kale (laga bilaabo 8aad illaa 25-aad ee kaboojinta) heerkulka waxaa lagu hayaa +37.8 ° C. Ukunta ilaa 6 jeer maalintii, jimicsiga ayaa hoos u dhacaya ilaa 60%.
Laga bilaabo 15-ka illaa 25-aad, alaabooyinka ku jira qaboojiyaha waxay bilaabaan inay qaboobaan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ukumaha duck ay leeyihiin kulayl badan oo kuleyl ah, iyo, si aysan u kululeynin, inta lagu jiro mudadaas, laba jeer maalintii, waxaad u baahan tahay inaad furto albaabka qalabka, ku daa qiyaastii rubuc saacad ah (illaa 15-20 daqiiqo).
Maalmihii ugu dambeeyay ee kulaylka (laga bilaabo 26aad ilaa 28aad), heerkulka ayaa si yar u hooseeya +37.5 ° C, laakiin qoyaanku wuxuu kordhay 90%. Waqtigaan, ukumo aan mar dambe leexin oo hawada ha ku jirin.
Laga bilaabo 27-ka illaa 29-keeda, habka cunnooyinka taranka ayaa soconaya. Ducklings waa in aan laga saarin qalabka ilaa ay gebi ahaan qalalan yihiin.
Nidaamkan oo dhan si cad ayaa lagu muujiyey miiska.
Muddada Taariikhaha, maalmaha Heerkulka, ° C Qoyaan,% U dhaqaaq
hal mar maalintii Qaboojinta, hal mar maalintii
1 laga bilaabo 1 ilaa 7 maalmood + 38-38,2 ° C 70 % 4 jeer -
2 laga bilaabo 8 ilaa 14 maalmood +37,8 ° C 60 % 4 ilaa 6 jeer -
3 laga bilaabo 15 ilaa 25 maalmood +37,8 ° C 60 % 4 ilaa 6 jeer 2 jeer 15-20 daqiiqo
4 laga bilaabo 26 ilaa 28 maalmood +37.5 ° C 90 % - -
Waa muhiim! Si loo xakameeyo geeddi-socodka maskaxda, si joogta ah u fuli habka dib-u-furista. Shucaaca waxaa la sameeyaa maalmaha 8-aad, 13-aad iyo 25aad ee xilliga xaddidaadda. Xaaladahaas oo aan wax horumar ah laga helin ama wax-isdaba-marin iyo cillado waa la dareemayaa waa in laga saaraa qalabka.
Marxaladaha horumarinta embriyaha xilliga kuleelka
Inta lagu jiro mudada wareegista, waxay uurjiifku ku socotaa 4 marxaladood oo horumar ah. Iyadoo la tixgelinayo marxaladahaas, shuruudaha nidaamka gudaha gudihiisa waa la hagaajiyaa.
Heerka koobaad. Waxay ka bilaabantaa maalinta ugu horeysa ee soo saarida badeecadda ukunta mashiinka, waxayna socotaa todobaad. Inta lagu jiro wakhtigan, embriyaha waxay leedahay waqti ay ku koraan ilaa 2 cm dherer. Waxa uu leeyahay wadne garaac, oo dhajiyay dhammaan xubnaha gudaha. Kiniinku waqtigaan wuxuu bilaabmayaa inuu u baahdo oksijiin badan, ogsijiin ku jirta jooniska ayaa noqda mid aan ku filnayn. Isticmaalka hawada wuxuu bilaabmaa marinka daboolka. Inta lagu jiro muddadan, waxaa aad muhiim u ah in lagu diiriyo ukunta ilaa +38 ° C kuna hayso qoyaan sare illaa 70%.
Marxaladda labaad Waxay socotaa isbuuca soo socda - laga bilaabo 8aad ilaa maalinta 14aad ee isugeynta. Hadda heerkulku wuxuu ubaahan yahay in si yar loo yareeyo (ilaa +37.8 ° C), laakiin hawada waa in la kordhiyaa. Si arrintan loo sameeyo, waxaad furi kartaa godadka dabaysha ee dheeraadka ah ee maskaxda. Waqtigaan waqtigaan waxaa jiraya dharbaaxada naas-nuujinta mustaqbalka. Marka la gaaro dhamaadka marxaladda 2aad, laga bilaabo maalinta 15aad, waxaad bilaabi kartaa inaad ku qabato ukumaha. Tani waa shuruud ku xiran boodhka, sababtoo ah ukumahoodu waxay ku jiraan baruur badan iyo biyo yar, laakiin maadaama ay haystaan ​​kuleyl badan. Kuleylka gudaha ukunta naftooda waxay gaari karaan +42 ° C, heerkulkuna wuxuu la mid yahay xaqiiqada ah in embriyaha ay kululaan doonto. Si looga fogaado tan, alaabta ukumaha waa in la sii qaboojiyo. Si taas loo sameeyo, si fudud u fur albaabka qoondheer illaa 20 daqiiqo. Waqtigaan, ma noqon doonto mid aad u macquul ah in la yareeyo badeecada ukunta oo ka soo baxa qoriga buufinta leh biyo nadiif ah, nadiif ah oo biyo leh, heerkulka taas oo ku saabsan +27 C
Marxaladda sadexaad wuxuu ka bilaabmaa maalinta 18aad ee horumarinta embriyaha. Waqtigaan, wuxuu ku dhowaad dhammaystiray dhismihiisa. Qoyaanku waxay hadda u baahan yihiin in la yareeyo 60%. Kuleylka ukunta ah wuxuu gaaraa + 40 ... +42 ° C, markaa waxaad u baahan tahay inaad sii wado qaboojiso oo maalin walba laba jeer ku buufiso.
Marxaladda afaraad Muddada kabadani waxay ka bilaabataa maalinta 26aad. Waxaa jira jiheyn toos ah oo ducklings ah. Maadaama boogaha ukumaha ducada ay ku adag yihiin oo ducklings ay ku adagtahay inay dhisto, waxaa laga yaabaa in yar yaraado. Si arrintan loo sameeyo, waa ku filan in kor loo qaado qoyaanka gudaha qaliinka, sidaa darteed inta lagu jiro muddadaas qoyaanka ayaa kor u kacaya ilaa 90%.
Muddada kabuubintu waxay ku dhamaanaysaa marka la isku daro ukumaha.
Ma taqaanaa? Ukunta oo leh embriyaha la qaboojiyey waxaa lagu go'aamin karaa si aad u fudud: Haddii aad qaadatid ukumahaas oo kale, waxay isla markiiba qaboojin doontaa, sababtoo ah ukunta oo aan lahayn embriyaha unugyada kari waaya inay xajistaan ​​heerkulka.
Maalin maalmaha ka mid ah ducklings ayaa u muuqda
Laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee kiniisada illaa dhalashada guutada iftiinka iftiinka wuxuu u dhexeeyaa 26 ilaa 28 maalmood. Badanaa, geedi socodka dufanka waxay bilaabaneysaa maalinta 26aad waxayna ku sii jiri kartaa wax ka yar hal maalin. Qaar ka mid ah shakhsiyaadka da 'yarta ah ayaa soo kabanaya kaliya bilowga maalinta 29aad, laakiin aan dambe.
Taariikhahaasi waxay la xiriiraan noocyada ugu badan ee ducks, inkastoo noocyada kale ay yeelan karaan waqti dheer. Tusaale ahaan, muddada xaddidaadda ee nuucaan moosku wuxuu socdaa min 33 ilaa 36 maalmood.
Fiiri sifooyinka murgaaridda ukunta digaagga mooska.
Laga soo bilaabo daqiiqada ugu horeysa ee la qabsasho buuxda, waxay qaadataa ilaa 24 saacadood. Intaa waxaa dheer, calaamadaha ugu horreeya ee isdabajoogga, dhammaan walxaha kulubka waxaa loo wareejiyaa baakidhka wax soo saarka. Horudhacayaashu waxay ka tageen masraxa ilaa wakhti ay qalalan yihiin.
Ka dibna loo wareejiyo qol gaar ah oo heerkulku noqon lahaa + 27-28 ° C.
Khaladaad cusub oo joogto ah
Inkastoo xaqiiqda ah in duurjoogta ay tahay arrin aan la qabin, hadana qaar ka mid ah beeralayda dabiiciga ahi waxay sameeyaan khaladaadka, taas oo ah sababta ay ujirto heer dhimasho oo sare oo aan ahayn kaliya chicks chatch, laakiin sidoo kale embriyaha inta lagu jiro xilliga dhalinta.
Khaladka ugu caansan waxaa ka mid ah:
Waqtiga dheeriga ah ee kaydinta alaabta ukunta ka hor inta aan la dhigin masraxa. Ka dib oo dhan, mudada dheer ee ukumaha, yareeyo hatchability dhamaadka. Waxay da'da, lumiyaan hantidooda, sidaas darteed soo saaridda guurka chicks waxay noqon kartaa 70-75% oo keliya.
Dhibaato la'aanta. Gogol-xummadu waa mid aad u dhib yar oo ku dhaca infakshanka fangaska, caaryada iyo bakteeriyada, tusaale ahaan, salmonella. Ka dib marka la gooyo, chicks ayaa jiran oo aan la aqbali Karin.
Isku-duubid la'aanta ah ukumaha ku jira qandhada. Tani waxay keenaysaa xad-gudubyada marxaladaha koritaanka, asynchrony, ducklings boobsiyada waqtiyo kala duwan.
Jermiska kuleylka leh. Tani waxay keentaa dhimashadooda. Iyadoo loo marayo dabeecadda dabiiciga ah, kulaylku ma dhicin, maaddaama looska-dhagxaanku inta badan ka soo jiidanayaan buulka, iyo faraca mustaqbalka inta lagu jiro wakhtigan ayaa leh waqti ay ku qaboojiyaan. Hooska, khatarta ah in kulaylku aad u sarreeyo. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah looga dhigo badeecada ukunta iyo intaa kadibna ku buufin biyo leh dhalada buufinta.
Qoyaan la'aanta. U hoggaansamida calaamaddan waxay saameeysaa caafimaadka chicks iyo fudeydka ah ee buulkoodu yahay qolofka.
Qoyaan xad dhaaf ah. Tani waxay keentaa dheecaan badan oo amniotic ah. Waxay khatar u tahay in ay qashinka ku daadato xitaa ka hor intaanay hargabin.
Badbaadinta inta lagu jiro hawada. Waxay u horseedi kartaa foorarsiga embriyaha iyo joojinta horumarka.
Tirada yar ee kufsiga. Sababtoo ah qaladkan awgiis, chicks ayaa ku dhajin kara dhinac dhinac ka mid ah qolofka, taas oo keeni doonta isbeddel xagga koritaanka ah, iyo ducklings ka soo horjeeda aan la isku halleyn karin.
Ciriiri dheer oo ay ka soo baxday qoyaan. Tani waxay ku fiicantahay xaqiiqda ah in ukunku aad u kululaan karo, sababtoo ah buufisku wuxuu leeyahay wareejin kuleyl ah, sidaas darteed sawirku waa inuu qaataa wax ka badan 2 daqiiqo.
Guud ahaan, geeddi-socodka ukunta duurjoogta guriga ma aha wax aad u adag waxayna keeni kartaa cayayaanka wanaagsan haddii aad raacdo shuruucda aasaasiga ah ee wax-qabadka. Faragelinta badbaadinta ducklings waxay noqoneysaa khaladaad khaldan oo gardarrada ah ee ku xadgudubka heerarka cimilada iyo qoyaanka.
Ma taqaanaa? Haddii ukun duck ah loo isticmaalo dhegta marxaladda ugu dambeysa ee maskaxda, ka dibna gudaha waxaad ku maqli kartaa codadka ay sameeyeen nuucyada - dhaqdhaqaaqa, dhaqdhaqaaqa, iyo xitaa xoojinta.
Waxa kale oo aad muhiim u ah in dhammaan tallaabooyinka la sameeyey wax soo saarka ukunta ee si cad u dhigma marxaladaha horumarinta embriyaha. Xaaladdan oo kale, waxaad ku xisaabtami kartaa cidlo caafimaad leh oo xoog leh.